Fantatr’Andriamanitra izay ilaintsika
"Anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon’i Jehovah, ary aza reraka, raha resy lahatry ny anatra ataony ianao; fa izay tian’i Jehovah no faiziny… Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka ; fa aiza moa izay zanaka tsy faizin-drainy?" Hebreo 12:5-7
«Nandray ny Tompo Jesosy ho Mpamonjiko aho, teo amin’ny faha-14 taonako. Nanaraka Azy aho nandritra ny taona vitsivitsy, saingy nony 18 taona dia «niroboka» tanaty fahafinaretan-dratsy sy fiainana nivahavaha. Rehefa nanao raharaha miaramila aho, dia nanolo-tena ho any Afrika. Te handeha lavitra an’i Lyon aho, lavitra an’Andriamanitra! Nony hanainga aho, dia nitomany ny raiko niteny hoe: «Valentin a, tsy azo vazivazina Andriamanitra», dia notononiny tamiko ilay andininy ao amin’ny Baiboly hoe: “Izay afafin’ny olona no hojinjainy” (Galatiana 6:7). Nanjohy ahy hatrany io andinin-tSoratra Masina io, nandritra ny dia naharitra teny an-tsambo sy teny ambony fiaramanidina, mandra-pahatonga tany Afrika. Maro ny zavatra nodiaviko, ary ny taona manaraka, dia nisy Afrikana iray niresaka tamiko, nitondra ahy tany ambanivohitra indray alahady, hihaino misionera. Nokasihin’ny Tompo indray ny foko. Ny alarobia taorianan’io aho dia voan’ny lozam-piarakodia, ary tsy nahatsiaro tena nandritra ny roa volana mahery. Nisy fandidiana samihafa natao tamiko, ka avy eo aho dia tsy maintsy niverina nianatra namindra, niteny, nihinan-kanina irery! Nandalo fotoam-pahakiviana aho indraindray, nandritra ireo taona tsy nahafahako nihetsika, saingy Mpampionona mahery Ilay Andriamanitro, tao anatin’izany fitsapana izany. Mbola mitondra takaitra hita maso vokatr’io loza mahatsiravina io aho. Nefa ampian’Andriamanitra aho, miezaka hanompo Azy, na eo aza ny kilemako; ary afaka miteny aho, 45 taona mahery aty aoriana, fa mahatoky Andriamanitra. “Fa izay tian’i Jehovah no anariny, dia tahaka ny ataon’ny ray amin’ny zanaka tiany” (Ohabolana 3:12).»